China Liquid ncha na shampoo ngwugwu cheetainer akpa na igbe ụlọ ọrụ na suppliers | Kaiguan
Akpa ncha mmiri mmiri na ncha ntutu n'ime igbe
Ncha mmiri mmiri na akpa ncha ntutu n'ime igbe
Ncha mmiri mmiri na akpa ncha ntutu n'ime igbe igbe ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na nkwakọ ngwaahịa na uru dị mma nke ihe siri ike ma ọ bụ nke siri ike, nke na-eme ka ọ bụrụ ụzọ kachasị mma na nhọrọ ndị a niile. Ọ nwere akpa rọba nke nwere ụdị cube, ọtụtụ oyi akwa, mgbata, okpu ma ọ bụ valvụ na igbe kaadiboodu.
A na-eji plastik multilayer mee ncha mmiri mmiri na akpa ncha ntutu n'ime igbe. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ.
Nke gara aga: Japanese sake 18L akpa cheetainer n'ime igbe
Osote: Ngwugwu 5l 10l 20l hand sanitizer na disinfectant cheetainer akpa n'ime igbe.
Akpa N'ime igbe 10l
Akpa Na Igbe Maka Mmanụ aṅụ
Akpa na igbe sirop
Akpa na igbe Vodka
Akpa Maka Bibs
Akpa mmanya mmanya na igbe
Akpa mmanya n'ime igbe